Uppdaterades 9 jun 2021 11:30
Dhamaan cid kasta oo bulshada ka mid ah, shakhsiyaadka gaarka ah iyo dadka waxqabadyada ka mas'uulka ah labada waxa uu waajibaad ka saaran yahay inay qaadaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka fayruska.
Taloda qaranka iyo waxyaalaha gobol ahaan lagu saleeyey
Waxay Folkhälsomyndigheten soo saartey xeerar iyo talobixin guud oo ku lug leh faafitaanka covid-19 oo lagana akhrisan karo bogga Folkhälsomyndighetens webbplats. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Marka xeerarka iyo taloda Folkhälsomyndigheten la reebo ayaa waxa jira talobixino gaar ah oo gobollada qaar khuseeya kuwaas oo aad ka akhrisan karto bogga Krisinformation.se. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Waxa adiga ku saaran waajibaad shakhsi ahaaneed oo aad adiga naftaada iyo ta dadka kaleba ugaga ilaalineyso faafitaanka covid-19. Waxa gaar ahaan muhiim ah inaad dadka kooxaha khatarta ugu jira ka midka ah fayruska ka ilaaliso.
Guriga joog haddii aad calaamado covid-19 ah leedahay.
Si fiican oo joogto ah ugu dhaq gacmaha.
La soco waxyaalaha talobixinaha gaarka ah ee ka soo baxaaya Folkhälsomyndigheten iyo dhakhaatiirta ka hortagga cudurrada faafa ee gobolka.
Kaliya la dhaqan dad kooxo yaryar ah.
Kaliya la dhaqan/waqti la qaado dadka aad caadiyan la kulanto, dadka aad la degan tahay ama dhowr asxaab ah uun iyo qaraabada qoyska ka baxsan.
Haddii aad la kulanto dadka ka baxsan kooxahaaga yaryar waa inaad masaafad isku jirsataan. Waxa la doorbidayaa inaad dibada isku aragtaan
Waxa dadka la tallaalay saddex todobaad ka dib markay dawska koowaad qaataan ay la kulmi karaan dadka ka tirsan dhowr qoys oo kala duwan. Laakiin ka fikir inaad weli fayruska qaadi karto. Waxa sidaas darteed muhiim ah in la sii wato in la ilaaliyo dadka la wada dhaqmo ee kooxda khatarta ugu jira ka midka ah.
U jirso masaafad dadka kale oo ka foojignow goobaha saxmad/ciriiri badan leh.
Dadka kale masaafad u jirso. Waxay taasi gaar ahaan muhiim tahay markaad muddo badan wada joogtaan iyo markaad gudaha ku jirto.
Iska ilaali goobaha sida dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo gaadiidka dadweynaha haddii ay saxmadi halkaas ka jirto.
Kaligaa soo adeego oo dukaamada ha dhex joogin wakhti ka badan inta caadi ahaan loo baahan yahay.
Iska ilaali inaad dad cusub la kulanto xilliga aad safarka ku guda jirto iyo meesha aad u socoto.
Dadka kale ula kulan hab amaan ah
Dadka waayeelka ah iyo dadka kale ee ka tirsan kooxaha kale ee khatarta ugu jira waxay leeyihiin khatar weyn oo ay si xun ugu jiranayaan.
Xitaa inksatoo aanu jir wax tallaal ah oo boqolkiiba boqol ku difaacaaya ayaa hadana qofka la tallaalay uu dareemi karaa kalsooni inuu tallaalku ka difaacayo doono inuu si xun ugu jirado.
Waxa muhiim ah in dadka ka tirsad kooxaha khatarta ugu jira iyo iyaga cida garab joogtaaba ay hubiyaan inay si amaan ah u kulmaan iyagoo masaafad isku jirsanaaya iyo in qofka leh calaamadaha ugu yaryar uu iska joojiyo la kulanka dadka kale.
Haddii intii lagu jiray lixdii bilood ee ugu danbeeyey uu kugu dhacay covid-19 ayaa waxa laga yaabaa inaad khatar ka yar oo uu adiga kuugu dhaco aadna dadka kalena ku qaadsiiyeyso leedahay ka dib markaad infegshanka qaadey. Taasi mid la mid ah ayaa shaqeynaysa haddii lagu tallaalay. Iyadoo ay sidaas tahay ayaa hadana ay muhiim tahay in talada Folkhälsomyndighetens la raaco talobixinta si loogu dhimo khatarta uu fayrusku ku faafaayo.
Af saabka/af gashi gaadiidka dadweynaha dhexdiisa
Dadka dhashay 2004 ama wixii ka horeeyey waa inay maalmaha aan fasaxyada aheyn saacadaha 7–9 iyo saacadaha 16–18 isticmaal af saab markaad ku safrayso gaadiidka dadweynaha ee aan tigidh kursi lagu xajisto/qabsado la iibsan karin.
Wax dheeraad ah ka akhri (Boggagu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish)
Talobixinaha gobal ahaaneed
Talobixino lagu saleeyey ee dadka la tallalay oo ku yaala bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten
Waxyaabaha ku saabsan masuuliyada shakhsi ahaaneed oo ku dhigan bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten
Waxyaalaha ku saabsan sida aad bulshada ula dhaqmi karto uguna safri karto si fayruska amaan ka ah oo ku dhigan bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten
Waxyaalaha ku saabsan sida aad naftaada iyo ta dadka kaleba ugu ilaalin karto oo ku dhigan bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten.